लकडाउनमा आमाहरु- विविधा - कान्तिपुर समाचार
लकडाउनको यस अवधिमा बिना काम बसिरहेका कति पुरुषले आफ्ना घरका महिलाहरुलाई भात भान्छाको काममा पालो दिएर आफ्नो रुचि र चासोको समय दिन फुर्सद दिए होलान्?
वैशाख ४, २०७७ ज्योत्स्‍ना प्रसाई
काठमाडौँ — आज मेरी आमाको जन्मदिन । तपाईंको जन्मदिनमा आज के खाने त आमाभन्दा आमाले भन्नुभो, 'तिमीहरुलाई जे मिठो लाग्छ त्यही बनाइदिन्छु।' बुबाले भन्नुभो, 'यही लकडाउनभरि हो घर बस्ने फुर्सत, केके बनाएर खाइराखौ है यो बेला ।'
बुबाले दाईको र मेरो मनको कुरा ठ्याक्कै बुझ्नुभो । बुबाको यो कुरा सुनेर आमाका दुखिरहने घुडा आफैं निको भए । पाखुरा तयार भए ।आमा यसरी तयार हुनुभयो कि मानौं उहाँको बर्सौदेखिको घुडा दुख्ने रोग एउटा झुट हो। मानौं उहाँले कहिल्यै भान्छाका काम छुनै पाउनु भएको छैन र अहिले यो मौका पाउँदै हुनुहुन्छ पहिलोपटक। घरभित्रका काम गर्ने बेला आमा सधैं आफैं तयार भैहाल्नुहुन्छ। यसरी दुख-सुख, सन्चो-बिसन्चो, रुचि-अरुचि जे भएको बेला पनि आफैं तयार हुने आमालाई अरुका माग सामान्य लाग्छन् भने आफ्ना दुखाई असामान्य।
जस्तोसुकै अवस्थामा पनि आफ्नो घरपरिवारलाई खुशी बनाउन पाउनुमा आमा गर्व गर्नुहुन्छ। र, बुढेशकालको घुँडाको दुखाइले घरपरिवारप्रति परेको असुविधाले आफैंलाई घृणा। यसरी दिनरात आफ्नो परिवारको सुख र खुशी सोच्ने आमालाई हामी सन्चो, बिसन्चो सोध्न अक्सर बिर्सिदा रहेछौं। भान्छाभित्रको काम गर्न तपाईंलाई कत्तिको मजा आउँछ आमा भनेर हामीले आफू बयस्क भइसक्दा एकचोटी पनि सोधेनौं होला । दिनहुँ बिहान एक्लै दाल, भात, तरकारी, अचार तयार पारेर खाना खाएपछि भाडा माझेर भान्छा सफा गरिसक्दा आफ्ना घुँडालाई आराम दिन टुसुक्क बस्न भ्याउनुहुन्छ भनि सोध्न अल्छी गर्दा रहेछौं। पाठेघर दुखाईका बाबजुत गरेका दुख, घुडा नचल्ने भइन्जेल श्रीमान र सन्तानका रहर पूरा गरिदिँदा पाएको सुख हामीले कहिल्यै सोधेनौं होला, सोध्यौं त ? अरुले नसोधे आमाले आफैं पनि भने हुन्छ नि ! आमाहरु क्रान्तिकारी हुँदैनन् कि के हो? नसोधेर हो? कि नसिकाइएर ? केही बोल्दैनन् त !
यसरी नबोली घरधन्दामा ब्यस्त भएपछि आमाले थाकेको छु भनेर गुनासो गर्न बिर्सिछिन् । परिवारको भान्छाभित्रका आवश्यकता पूरा गर्न हमेशा तयार रहनु उनलाई आफ्नो जिन्दगीको एकमात्रै औचित्य लाग्दै गएछ ।
आमालाई अहिले भ्याइनभ्याइ छ। यसरी लकडाउनले खासै फुर्सद दिन नसकेको आमाको दैनिकी आफ्नो पूरा परिवार आँखा अगाडि खुशी बनाएर त्यसलाई महशुस गर्न ब्यस्त छ । 'यो बेला घर बसेर टन्न खाने हो, ज्यान पो धेर मोटाउने भयो हौ' भन्ने हाम्रा बुबा र दाजुभाइले खाइसकेपछि कतिजनाले भान्छेलाई आराम गर भनेर सफाईलगायतका भान्छाका अरु काम आफैं गरे होलान्? अहिलेसम्म कतिचोटि भान्छाभित्र पसेर आफैं पकाए होलान्? घरका अरु सदस्यलाई खुवाए होलान् ?
आमाहरू क्रान्तिकारी नहुनु , नबोल्नु उनीहरुको इच्छा वा अज्ञानता , बाध्यता वा बेवास्ता जे पनि हुन सक्छ। उनीहरुले यसबारेमा सोच्नु पर्छ बोल्नु पर्छ र बोल्न सिकाइनु पर्छ । यति धेरै विषयको ज्ञान लिने र जिज्ञासा राख्ने वर्तमान पुरुषले आफ्नै घरभित्रका महिलाका रुचि, बाध्यता, इच्छा र स्वास्थ्यका बारेमा कति जिज्ञासा राख्छन् होला ? लकडाउनको यस अवधिमा बिना काम बसिरहेका कति पुरुषले आफ्ना घरका महिलाहरुलाई भात भान्छाको काममा पालो दिएर आफ्नो रुचि र चासोको समय दिन फुर्सद दिए होलान्? सर्वत्र छुट्टीको बेलामा आमा र श्रीमती, दिदिबहिनीले भान्छाबाट कतिदिनको छुट्टी पाए होलान् ? यदि तपाइँ पुरुष हो भने तपाईले पछिल्लो एक महिनामा कतिचोटि खाना पकाउनु भयो? ए एकछिन, तपाईलाई खाना पकाउन त आउँछ ?
दाई सजिलै जन्मिन सकेनन् ,अप्रेसन गर्नुपर्ने भयो । त्योबेला लठ्याउन लगाइएको एनेस्थेसिया सुईले दाई जन्मिएको छ महिनासम्म आमाको दाहिने खुट्टाले प्राय: केही थाहा पाउँदैनथ्यो रे ! त्यो खुट्टा अझै झम्झमाउँछ बेला बेला । ढाड दुख्न पनि सुरु भयो भन्नुहुन्छ आमा त्यसपछि । आजकाल पाठेघरको समस्या देखा परेको छ रे! घुडा दुख्ने त बुढेसकालमा हुने नै भयो।
चालीस काटेपछि जिउ पहिलाजस्तो नहुँदो रहेछ । हात खुट्टा दुख्न, झम्झमाउँन थाल्दा रहेछन्, जागर मर्दो रहेछ। अझ मासिक चक्र हुँदा त जिउ उठाउनै गाह्रो। महिनावारी हराउन लाग्दा चिड्चिडापन, अत्याधिक रक्ताश्राब हुँदोरहेछ। यस्तो बेलामा आमालाई कहिलेकाहीं कामबाट फुर्सद भएर बस्न मन हुँदो हो । बर्षौंदेखि बस्दै आएको भान्छामा छिर्न मन नलाग्दो हो । आफ्नो मन भुलाउने, रुचि हुने, खुशी दिने काम गर्न मन लाग्दो हो। तर विडम्बना हाम्रो बुबा र दाईलाई भान्छाको काम नै आउँदैन!
श्रीमान र सन्तानको खुशीमा आफ्नो खुशी देख्ने आमा साक्षी भावमै जिन्दगी बिताउँछिन्। राजा जनक र अस्टाबक्र ऋषिबीचको संवादमा आधारित 'अस्टाबक्र गीता'को पनि सार मुलत यही हो- कर्ता र भोक्ता नभई जीवन साक्षी भावले बिताउनु । यस ग्रन्थका अनुसार साक्षी भावले तटस्थ हुँदा आत्मज्ञान पाई मुक्त हुन सकिन्छ । साक्षी हुँदाहुँदै पनि घरकै चार पर्खालभित्र बाँधिएकि हाम्री आमा के आध्यात्मिक अर्थमा चाहिँ मुक्त छिन त? आध्यात्मिक या अन्य अर्थको मुक्ति त टाढाको बस, हाम्रो समाज केही आधारभूत तहमै चुकेको छ।
हास्ने बुहारीलाई बेश्यापात्र र इश्वरसम्झी श्रीमानको सेवामा अहोरात्र समर्पित हुनुजस्ता उपदेश 'बधु-शिक्षा'ले दिएको छ। २०० बर्षअघि आदिकवि भानुभक्त आचार्यद्वारा लेखिएको बधु-शिक्षा (बुहारीलाई शिक्षा) अहिले पनि कतिपय परिवारले हुबहु अभ्यास गरेको पाइन्छ। नेपाली समाजको पुरुष-प्रधान संरचनामा अधिकांश महिलाहरु यही सेरोफेरोमा पाइन्छन्। धेरै परिवारमा महिलाको अवस्था चिन्ताजनक छ । झन् यस लकडाउनले महिलाहरु अझ हिंसाको सिकार भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। यो लकडाउनको अवधिमा धेरैजसो पीडितहरु चौबिसै घण्टा पीडकहरुसँगै छन्। घरबाटै अफिसको काम भ्याउने महिलाहरुमा छुट्टै चुनौती छ। कार्यालयको कामसँगै घरायसी काम र परिवारको हेरचाह सबै भ्याउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिको सिर्जना भएको छ। सामान्य परिस्थतिभन्दा लकडाउनको बेला महिलाहरुको मानसिक स्वास्थ्यको पनि ध्यान दिन जरूरी छ।
घरमा आमाहरुले गरेका समर्पणको प्रशंसा हामीले कहिल्यै गरेनौं । कारण हामीले जानेनौं । आमाको समर्पणको सराहना गर्न हामीलाई कहिल्यै सिकाइएन । धन्याबाद, आइ लाभ युजस्ता वाक्यहरु घरमा आमाको प्रशंसा गर्नका लागि धेरै कम मात्रामा अभ्यासमा आए होलान् । हामी लजायौं होला। आमाले मिठो परिकार पकाएका दिन हामीमध्ये कतिले आमाको प्रशंसा गर्दै धन्याबाद दियौं ? बाहिर काम गरेर थाकेर आउने आमालाई हामीले कतिपटक 'आज तपाइँ थाक्नुभयो म खाना बनाउँछु' भनेर भान्छा पस्यौं होला ? आमाहरुको सम्मान र प्रशंसा गर्न घर, समाज र सिंगो राष्ट्र नै पछि परेको छ । देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी ) मा घरमा आमाले गरेको श्रमको मौद्रीकरण हुँदैन । यो नहुनुले अधिकांशको अवचेतन मनमा घरको काम सजिलो, मूल्यहीन र तुच्छ हो भनेर जरा गाडेको छ । लकडाउनको यो अवधि घरभित्रको काम गरेर यसको औचीत्य, मूल्य र कठिनाइ थाहा पाउने यो उत्तम मौका हो।
आमाबारे प्रसिद्ध लेबनानी साहित्यकार खलिल जिब्रानले लेखका छन्- 'मानवजातिको ओठमा सबैभन्दा सुन्दर शब्द 'आमा' हो र सबैभन्दा सुन्दर आह्वान 'मेरी आमा' को बोलावट हो। यो आशा र प्रेमले भरिएको एक शब्द हो, एक मीठो र दयालु शब्द जुन मुटुको गहिराईबाट आउँछ। आमा सबै कुरा हुन्। उनी हाम्रो पीडामा सान्त्वना, दु:खमा आशा र दुर्बलतामा हाम्रो बल हुन्। उनी प्रेम, दया, सहानुभूति र क्षमाको स्रोत हुन्। जसले आफ्नी आमालाई गुमाउँछ उसले शुद्ध आत्मा गुमाउँछ, जसले उसलाई निरन्तर आशीर्वाद दिन्छिन् र रक्षा गर्छिन्।'
घरायसी कामधन्दाबाट टाढा भागेर आमा आजसम्म कहीं गइनन्। यी भोगाईहरु, यी दुखाईहरु उनले केवल भोगिरहिन् साक्षी भएर । यी भोगाईले शरीर र दिमागमा ल्याएका सम्पूर्ण छाल, परिवर्तन आमा चुपचाप सहन्छिन्। आमालाई लाग्छ जिन्दगी यही हो, यत्ति मात्रै । घरबाहिर जिन्दगी हुन्छ भन्ने आमालाई थाहा छैन। सन्तान ,श्रीमान् र घरबाहेक अरु कुरा आमाले भोगेकी छैनन् । अरुलाई खुशी बनाएर आफ्नो जीवन बिताइदिने आमालाई उनीभित्रै सन्तुष्टिको मुहान छ भनेर बुझाइदिने कोही भएन । आफूमा अन्तरनिहित प्रतीभा, रुचिलाई चिन्ने समय आमाले कहिल्यै पाइनन् । घरधन्दा र चुलोमा मात्र आफ्नो अस्तित्व पाउने आमालाई आफूसँगै केही समय बिताउन उनका श्रीमान र सन्ततिले पालो दिनु पर्छ। जान्दिनँ भनेर खाना खानबाहेक अरुबेला भान्छा नपस्ने पुरुषहरुले यो अवधिमा बर्षौदेखि भान्छामा लकडाउन भएकी आफ्नी आमा र श्रीमतीलाई घरभित्र स्वतन्त्र छोडिदिनु महानता हुनेछ। यो अवधिमा घरभित्र पुरुष महिला दुवैले आरामको अनुभूति गरुन्। केही समय आफूभित्र र बाहिरको ब्रह्माण्ड, आफ्नो आत्मा चिन्ने मौका महिलाले पाउन् ।
सँधै भान्छामा बिताउने आमाले अब केही समयका लागि फुर्सत पाउन्। सँधै सप्पै भ्याउने आमाले फुर्सत नपाएर बिसन्चो भइ महिनौका लागि कुनैदिन थला पर्नुपरोस्। थला परिहाले पनि त्यो समयमा भोकैपर्ने डर परिवारमा नहोस् । अहिले समय छ- आमा, दिदीबहिनीहरुलाई फुर्सद दिने। यही फुर्सदको समयबाट फुर्सद दिन सिकौं । सुरुवात यहींबाट गरौं । अरुबेला पनि यस्तै गरौं । सँधै यस्तै गरौं।
प्रकाशित : वैशाख ४, २०७७ १३:४८
राहतमा चामलको सट्टा मकै
खाद्य संस्थानको डिपोमा चामल मौज्दात नहुँदा बारेकोटका ३ हजार घरधुरीलाई मकै वितरण गरिँदै
वैशाख ४, २०७७ भीमबहादुर सिंह
जाजरकोट — बारेकोट गाउँपालिकाले विपन्न घरपरिवारलाई राहतस्वरुप मकै वितरण गर्ने भएको छ । करिब एक महिनादेखिको लकडाउनका कारण अतिविपन्न परिवारमा खाद्यान्न अभाव देखिएको भन्दै मकै वितरण गर्न लागिएको हो ।
खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड (खाद्य संस्थान) को घाटस्थित डिपोमा चामल मौज्दात नभएपछि मकै वितरण गर्ने निर्णय गरिएको हो । अहिले घाट डिपोमा ७ क्विन्टल मात्र चामल मौज्दात छ । बाहिरबाट तत्काल आपूर्ति हुने सम्भावना नभएपछि मकै वितरण गर्न लागिएको गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्र शाहीले बताए । उनका अनुसार राहतका लागि स्थानीयस्तरमै मकै खरिद गर्न थालिएको छ ।
उनले ३ हजार विपन्न घरमा २५ किलो मकै, आधा लिटर तेल र २ किलो वितरण गर्न लागिएको जानकारी दिए । गाउँपालिकाले मकै खरिद गर्न सबै वडामा डेढ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । अध्यक्ष शाहका अनुसार वडाबाट वितरण हुने खाद्यान्नले ३ हजार घरधुरीका १२ हजार जनालाई १ महिना खान पुग्ने अनुमान छ । शिक्षक, कर्मचारी, व्यापारी र जनप्रतिनिधिबाहेक सबैको घरमा मकै वितरण गरिने उनले बताए ।
बारेकोटमा धान उत्पादन न्यून हुन्छ । हिउँदे बाली गहुँ र जौं नपाक्दा विपन्न परिवारमा खाद्यान्न समस्या देखिएको छ । बाहिरबाट चामल आपूर्ति गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कार्यपालिका वैठकले मकै वितरणको निर्णय गरेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्दबहादुर सिंहले बताए । स्थानीय उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन पनि राहत अभियानले सहयोग गर्ने उनले दाबी गरे । ‘स्थानीय बाली उत्पादनमा जोड दिन विशेष अनुदानका कार्यक्रम ल्याउन लागेका छौं,’ उनले भने, ‘वर्षेनी खाद्य अभावको मारमा परिरहेको बारेकोटलाई खाद्यान्नमा निर्भर गराउन आवश्यक तयारीसमेत थालिएको छ ।’
खाद्य व्यापार तथा कम्पनी लिमिटेडले खाद्य अभाव हुने बारेकोटमा खाद्यान्न ढुवानीमा वर्षौंदेखि लापरबाही गरिरहेको स्थानीयको गुनासो छ । स्थानीय मनसरा विकले घाट डिपोमा कहिल्यै पर्याप्त चामल नहुने बताइन् । २ हजार ५ सय क्विन्टल चामलको कोटा निर्धारण गरिएको डिपोमा यस वर्ष १ हजार ४ सय क्विन्टल मात्र चामल ढुवानी भएको छ ।
एमबी विल्डर्सले गत चैत मसान्तसम्म सबै चामल ढुवानी गर्ने गरी सम्झौता गरेको भए पनि अहिलेसम्म आलटाल गरिरहेको कम्पनीका शाखा कार्यालय प्रमुख धर्मबहादुर बस्नेतले बताए । ‘ठेकेदारले लकडाउनका कारण चामल ढुवानीमा फेरि आलटाल गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कारबाहीको चेतावनीसहित ठेकेदार कम्पनीलाई तत्काल चामल ढुवानी सक्न ताकेता गरिएको छ ।’
प्रकाशित : वैशाख ४, २०७७ १३:४७